Sida ugu sahlan lagu garto naagtaan ku jeclayn | Gaaloos.com
Home » galmada » Sida ugu sahlan lagu garto naagtaan ku jeclayn
Naagta aan ku jeclayn haddii ay dan kale kaa leedahay waxay kuu macaynaysaa hadalka iyo dhaqanka, waxaa laga yaabaa maanta oo dhan inay ku celceliso aboowe macaan maxaan kuu qabtaa waan ku jeclahay hadaladaas oo ninka maskaxda ka soo rida, laakin waxaad ogaataa jacaylka dhabta ah inuu leeyahay astaamo badan oo ninka ku fahmi karo naagta haddii ay jeceshahay iyo haddii kale.
Naagta aan ku jeclayn maxaa ku kallifaya beenta?
waxaa laga yaabaa inaad tahay nin lacag leh, gabdhaha qaarkooda way xoolo jecel yihiin waxaa dhici karta marka ay kaa soo gasho dhanka lacagta inay kaa qaadi karto lacagta ay rabto inay kaa qaado, waxay isku dayaysaa hadali jacayl inay kugu tirahdo, laakin hadaladaas ma jiraan qalbiga waxaad ka fahmi kartaa inay jilayso hadalka noocaas ah.
Astaamaha ugu muhimsan jacaylka waa maxay?
haddaba waxaad ogaataa jacaylka dhabta ah waxaa lagu gartaa inay naagta hadalkaaga maqasho inaysan beenkuu sheegin, inay marka aad ka maqan tahay ay kaa fikirto, inay dantaada ka fikirto, inay isku daydo wax kasta inay kuu hurto, astaamahan ayaa lagu gartaa gabadha inay ku jeceshay iyo in kale.
Xaaskayga ma garan karaa inay jeceshay?
si fiican ayaad u garan karaa, waxaad ku garan kartaa xaga sariira marka aad galmo u baahato lagama yaabo inay kuu diido, haddii aad aragto xaaskaaga galmada ka ordayso ama raaxada ka cararayso waxaad ogaataa inuu jcaylkeeda wax ku jiro, naagta ninka marka ay jeceshay waxay aad ugu raaxaysanaysaa galmada, balse waxay jeceshay inay mar kasta afkiisa afkeeda ku hayso candhuufta ninka ma dhibsato, jacaylka hadalo keliya ma aha wwa waa falal.
Astaamo waxaa jira xiliga galmada laga dareemo naagta, haddii ay kaa fogaanayso oo aysan rabin galmo inay kula samayso ama marka istiinka socdo inay istiinka ka fogaanayso siiba dhunkashada ama aad ka dareemayso afkeeda inay kaa dheeraynayso oo aysan arbin inay afka kaa dhuuqdo calaamo waxay u tahay inaysan jacayl meesha ku haynin oo dan kale ay wado, naagta marka ay ninka jeceshay si fiican ayay ugu walanaysaa inay jirkiisa ku raaxaysato shiirka xitaa way rabtaa.
Saamaynta jacaylka iyo kacsiga galmada hablaha
Title: Sida ugu sahlan lagu garto naagtaan ku jeclayn